Astaanta cusub ee 'Ebury' waxay la socotaa isbeddellada naqshadeynta ee 2017 | Abuurista khadka tooska ah
Sumadda caanka ah ee caanka ah Penguin Random House ayaa dib loogu soo nooleeyay astaan ​​cusub hal abuur badan oo raacaya isbedelada la bixiyay sanadkii 2017 ee la xiriiray qaabeynta. Taasi 'sarreynta' ayaa lagu arkaa gudaha astaamo kala duwan oo noocyada ah sida Fanta, Calvin Klein ama xitaa aqoonsiga muuqaalka cusub ee farshaxanka iyo heesaa Elton John.
Ebury waxay marto waddo lamid ah kuwa magacyada waaweyn leh oo leh erey loogu talagalay in lagu aqoonsado caadada shirkadahaas ku calaamadee astaamahaaga dhammaan qoraalka 'far weyn'. Farqiga u dhexeeya astaantii hore ee Ebury iyo tan hadda jirta ayaa ka sii muuqata inay ka casrisan tahay oo ay la socoto maalmaha ay ciyaarayaan.
Waxay qaataan geesinimada si ay u badalaan kiiska hoose, oo ah astaan ​​ku qoran casaanka farta, naqshad cusub oo qaadata nidaamka midabka lagu gartaa inuu yahay 'mid cusub oo firfircoon' Marka la eego adeegsadaha oo wax yar ka wareeri doona sida ugu wanaagsan ee isbeddelka loogu sameeyay isaga.
Mid ka mid ah saameynta ugu xiisaha badan ee 'sare u qaadista' waa taas isticmaalka laba midab oo semi-opaque oggol yahay in la abuuro saameyn saddex-cabbir ah taas oo awood u leh inay ku jahwareerto isha aragtida koowaad ee astaanta cusub. Waxa ay bixiso waa dareen weyn oo hal-abuurnimo iyada oo la abuurayo dareen aan dhammaystirnayn iyada oo la dul dhigayo; tusaale cad astaanta cusub ee Ebury.
Haddaad intaas ku darto midabyo ayaa la xushay oo ku guuleysta kala duwanaansho wanaagsan oo u dhexeeya iyaga.
Waa waqti uun bilow inaad ka muuqato astaan ​​cusub oo ku saabsan alaabooyinka iyo suuqgeynta Penguin, oo sidaas darteed waxay leeyihiin fikrad muuqaal ah oo wanaagsan oo ku saabsan waxa loola jeedo isbeddelkan weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Nooca Penguin wuxuu raacayaa isbedelka naqshadeynta hadda ee leh astaantooda cusub ee Ebury